Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Intshayelelo yomsebenzi werekhodi yokuqhuba imoto
Kukho imisebenzi emininzi yokurekhoda idatha:
Okokuqala, ingozi inokuphinda ifumaneke.
Okwesibini, ukuqhuba ukudinwa kunokuthintelwa. Ingxelo eqhubayo inokurekhoda ixesha lokuqhuba komqhubi. Abanye arekhoda banomsebenzi wokukhumbuza. Ukuba udiniwe, unokukhumbuza umniniyo ukuba aphephe ukudinwa.
Okwesithathu kukudlala indima ekubekeni esweni ukhuseleko. Isishicileli sokuqhuba sijonga imeko yemoto nanini na. Idityaniswe nolawulo lwenethiwekhi ekude, xa izinto ezisemotweni zibiwe okanye imoto ilahlekile, imiyalelo yenkqubo inokusetyenziselwa ukufota ngokuzenzekelayo ngaphakathi nangaphandle kwemoto ukubonelela ngemikhwa yokusombulula ityala.
Ukubona oku, abahlobo abaninzi baya kubuza, ungayifaka njani le rekhoda yokuqhuba? Kulungile, masithethe ngendlela yokufaka irekhodi lokuqhuba.
Kuqala chonga indawo yokufaka ingxelo. Isishicileli sokuqhuba sifakwa embindini wesithuthi, esilungele ngakumbi ukurekhoda iimeko zokuqhuba.
Okwesibini, faka imemori khadi kwikhadi lokurekhoda ukurekhoda idatha, kwaye ufake impembelelo yokurekhoda kwindawo efanelekileyo. Ngoku uninzi lweerekhodi zethu zokuqhuba eziqhelekileyo sinokufakwa kwisipili esingasemva semoto.
Okulandelayo, kufuneka ucwangcise indlela eya kwi-dash cam.
Ukurekhoda ukurekhoda iintambo: uphahla â † ’A â †’ umlingane ongumqhubi wenqwelomoya baffle â † ’isokethi elula. Ukuba umgca umde ngokwaneleyo, unokuhamba ukusuka ezantsi kwenyawo yomkhweli uye kwisikhombisi secuba.
Okokugqibela, faka iplagi yamandla erekhodi lokuqhuba kwimoto yecuba yemoto yaseTshayina, vula umboniso wesishicileli sethu sokuqhuba, setha ixesha, irekhodi, kunye nokugcina ulwazi lohlaziyo lobuchwephesha, kwaye imeko yokufaka ilungile. Emva koko, abanini kunye nabahlobo banokukhetha ukuqhubela ngaphandle iirap ezimbini ukuvavanya kunye nokuhlalutya ukuba ngaba irekhodi linakho ukuwulawula umsebenzi ngokwesiqhelo.
Ukuba abahlobo bakho banoluvo lokuba abanazandla zomeleleyo kwaye bayoyika ukuba ukufakelwa kwabo kuya konakalisa isithuthi, ungakhetha ivenkile yee-4s yokulungisa izithuthi, okanye ivenkile yokulungisa iimoto abaziqhelileyo. Ungaya nakwirekhodi lokuqhuba xa uthenga kubo Xa uqhuba irekhoda, uyifaka ngqo. Gcina ixesha kunye neengxaki.
Edlulileyo:Utshintsho lwembali lokuhamba kwemoto
Okulandelayo:Zeziphi iindawo ezinokusetyenziselwa iprojektha?